अमेरिकामा वकिलसँग परामर्श – Page2– Vishwanews.com : Popular Nepalese News Media in New York, USA
Home / News / अमेरिकामा वकिलसँग परामर्श (page 2)
July 18, 2017 अमेरिकामा वकिलसँग परामर्श 0
कानूनी स्तम्भमार्फत महत्वपूर्ण कानूनी सल्लाह सुझाव उपलब्ध गराइदिनुभएकोमा विश्व सन्देश साप्ताहिकलाई धेरै धेरै धन्यवाद ! मेरो हालको स्टाटस पर्मानेन्ट रेसिडेन्ट छ । मैले गत महिना मेरो स्पाउस (जो अमेरिकामा टुरिष्ट भिसा, बी–१/बी–२ मा छ)का लागि आई–१३० पेटिसन फाइल गरेको थिएँ । यसै प्रसंगमा एकसाथ दुई जिज्ञासा राख्न चाहन्छु— (१) आई–१३० …
July 12, 2017 अमेरिकामा वकिलसँग परामर्श 0
मेरो श्रीमान् युएस सिटिजनद्वारा स्पोन्सर भएर ग्रीनकार्ड पाएर अमेरिका आएको डेढ वर्ष भयो । मलाई अमेरिका आउँदा २ वर्षको ग्रीनकार्ड दिएको थियो र २ वर्ष पुग्नुअगावै कन्डिसनल ग्रीनकार्डलाई १० वर्ष अथवा पर्मानेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ भनी सल्लाह दिएको थियो । अहिले मेरो श्रीमान्सँग मनमुटाव भएर डिभोर्स पनि भयो । कन्डिसनल रिमोभल …
July 5, 2017 अमेरिकामा वकिलसँग परामर्श 0
म अमेरिका सन् २००९ मा बी–२ भिसा लिएर आएको थिएँ। बी–२ भिसा एप्लाई गर्दा म विवाहित भनेर देखाएको थिएँ। मेरो श्रीमतीसँग सम्बन्ध खराब भएकाले मेरो अमेरिका आएपछि केही पनि सम्बन्ध हुन सकेन। मेरो अहिले एक अमेरिकी युवतीसँग केही वर्षको सम्बन्धपछि विवाह गर्ने स्थितिको सम्बन्ध कायम हुन गएको छ। नेपालमा सम्पर्क …
June 28, 2017 अमेरिकामा वकिलसँग परामर्श 0
म सन् २००२ मा बी–२ भिसामा अमेरिका आएको थिएँ। सन् २००७ मा असाइलमको निवेदन गरें। १ वर्षभन्दा बढी समय भएपछि असाइलमको निवेदन गरेको भनी इमिग्रेसन जजले सन् २०११ मा विथहोल्डिङ अफ रिमोभल भन्ने मात्र एप्रुभ गरिदियो। अहिले मेरो विवाह युएस सिटिजनसँग भएको छ। मेरो श्रीमान् सक्दो चाँडो म्यारिजको निवेदन पेश …
June 20, 2017 अमेरिकामा वकिलसँग परामर्श 0
मेरो असाइलमको निवेदन गएको महिनामा इमिग्रेसन जजले एप्रुभ गरिदियो। मेरा केही आफन्तहरु लण्डन, युकेमा छन्। ग्रीनकार्डको निवेदन पेश गर्न १ वर्ष पर्खनुपर्ने हुन्छ। यो बीचको समयमा कुनै तरिकाले ट्राभल गर्न सकिन्छ होला? यदि अमेरिका छाडी बारि गए केही समस्या होला कि? उत्तरको अपेक्षामा। – जे. थापा, न्यूयोर्क तपाईंको असाइलमको निवेदन …
June 6, 2017 अमेरिकामा वकिलसँग परामर्श 0
एउटी अमेरिकी महिलासँग दोस्ती बढ्दै गएपछि रोमान्टिक सम्बन्ध कायम हुन गयो। त्यसपछि उनले मलाई के–१ फियान्सी भिसामा अमेरिका लिएर आइन्। यहाँ आएपछि पनि हाम्रो सम्बन्ध ठीक नै रहन गएको छ। आएको डेढ महिना भइसक्यो। उनी विवाह गर्न तयारी नै छिन्। ९० दिनभित्रमा विवाह गर्नुपर्ने नियम पनि हामी दुवैलाई थाहा छ। …
June 1, 2017 अमेरिकामा वकिलसँग परामर्श 0
म अमेरिकामा एफ–१ भिसामा आएको थिएँ। एफ–१ भिसा कायम गर्न नसकेपछि आउट अफ स्टाटसमा बसेको थिएँ। टीपीएस आएपछि २०१५ देखि टीपीएसमा रही काम गरिरहेको छु। गत डिसेम्बरमा टीपीएस नवीकरणका लागि निवेदन पेश गरें, तर अहिलेसम्म निर्णय आएको छैन। मेरो पुरानो वर्क परमिटको म्याद पनि समाप्त भइसकेको छ। यो अवस्थामा के …
May 23, 2017 अमेरिकामा वकिलसँग परामर्श 0
मेरो बीएको ग्राजुएन २०१५ मा भएपछि एक वर्षको ओपीटी थियो । टीपीएस आएकाले टीपीएसका लागि दर्ता पनि गरें। यसपालि समयमै टीपीएसको पुनः दर्ता पनि गरें। मेरो ओपीटी समाप्त भए पनि इलिगल भएर नबस्ने इच्छा भएकाले एफ–१ भिसा कायम राख्नका लागि भोकेस्नल कोर्स गरेर एफ–१ भिसा कायम गरिराखेको थिएँ। अहिले झण्डै …
May 17, 2017 अमेरिकामा वकिलसँग परामर्श 0
विश्व सन्देश साप्ताहिकबाट कानुनी प्रश्नको जबाफ निरन्तररुपमा दिई नेपाली समुदायलाई सेवा पु¥याउनुभएकोमा कानुनविद् रमेश श्रेष्ठलाई धन्यवाद दिनु चाहन्छु। यसै क्रममा मेरो आफन्तको पनि एक प्रश्न भएकाले तपाईंसामु विश्व सन्देश पत्रिकामार्फत जिज्ञासा राखेको छु। मेरो दाइका लागि पेश गरेको आई–१३० पेटिसनमार्फत नेपालमा भिसा लाग्ने भएको छ। मेरो दाइ, भाउजु र सानी …
May 9, 2017 अमेरिकामा वकिलसँग परामर्श 0
मैले युएससीआईएसमा एसाइलमको निवेदन गरेको थिएँ। मेरो विवाहपछि श्रीमान्को युएस सिटिजनसिप प्राप्त भएकाले उहाँसँगै फेमिली पेटिसन गरें। त्यसपछि मेरो एसाइलमको निवेदन विथड्र गरें। तर, पछि युएससीआईएसबाट सोही एसाइलमको निवेदनलाई कोर्टमा पठाई फेरि अन्तरवार्ताका लागि चिट्ठी पठाएको छ। मेरो युएससीआईएसमा पेस गरेको फेमिली पेटिसनको रिसिप्ट लेटर आएको छैन। अब मैले के …